Agụụ, nchegbu, ma ọ bụ ike ọgwụgwụ? Aghụghọ iji mata ọdịiche ha | Bezzia
Agụụ, nchekasị, ma ọ bụ ike ọgwụgwụ? Aghụghọ ịkọwapụta ha
Nke Torres | 25/10/2021 16:00 | Ndụmọdụ gbasara ahụike
Iri nri bụ ihe dịịrị mmadụ, yabụ agụụ na -agụ ụbọchị niile bụ ihe nkịtị. Ọ bụghị naanị nke ahụ, ịkwesịrị iri opekata mpe ugboro atọ n'ụbọchị. Ma ọ bụghị ya, ahụ nwere ike na -ata ahụhụ n'ihi erighị ihe na -edozi ahụ. Ugbu a otu ihe bụ rie mgbe ahụ chọrọ ya, iji gboo mkpa na nke ọ bụla na ihe ọzọ bụ ime ya maka ebumnuche mmetụta uche.
N'ezie, ọ dịtụla mgbe ị na-eri nri n'ihi ike ọgwụgwụ, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere mmetụta nke nrụgide ma ọ bụ nchekasị, ị chọwo ihe ị ga-eri iji mee ka obi dajụọ gị. Nye ọtụtụ ndị mmadụ nke a bụ àgwà, usoro nke nwere ike ịghọ nnukwu nsogbu. N'ihi na nsogbu iri nri na -abata n'ụzọ nwere ezi uche, n'amaghị na ị maara, mana ha na -emecha kụda gị ma ọ bụrụ na ị chịghị ha n'oge.
1 Agụụ anụ ahụ ma ọ bụ agụụ mmetụta uche?
1.1 Agụụ, nchekasị ma ọ bụ ike ọgwụgwụ, aghụghọ iji mata ọdịiche ha
Agụụ anụ ahụ ma ọ bụ agụụ mmetụta uche?
Agụụ anụ ahụ bụ mmeghachi omume anụ ahụ, ịdọ aka na ntị na ọ chọrọ nri yana na -abịakwute gị n'ụdị agụụ. Nke ahụ bụ ihe mgbaàmà na-eme ka ị chọpụta umengwụ, enweghị ike, afọ efu, na nkenke, ihe ọ bụla n'ime ihe ịrịba ama ịdọ aka ná ntị na-eme ka ị na-achọ nri iji gboo mkpa ahụ. Kama, agụụ mmetụta uche na-egosi dị ka mkpali na-enweghị isi, mmetụta na-adịte aka nke a pụrụ ịchịkwa.
Mgbe ike gwụchara gị, ọ dị mfe ịnwe agụụ mmetụta mmụọ, n'ihi na ụbụrụ gị anaghị arụ ọrụ ọ na -aghọgbu gị iche na agụụ na -agụ gị. Agụụ site na nchekasị dị mgbagwoju anya karị, n'ihi na ejikọtara ya na nsogbu nwere nzụlite nke ekwesịrị ilebara anya. Akwara ndị na -emepụta nchekasị na -eduga gị ịchọ ngwọta ngwa ngwa nke iji mee ka ọnọdụ ahụ dị jụụ. Ọtụtụ mgbe, ha na-amalite ịta ụtaba, na-emeghị nke ahụ, na-achọ nri na-adịghị mma n'ozuzu nke ha ga-eji mee ka nchekasị kwụsị.
Agụụ, nchekasị ma ọ bụ ike ọgwụgwụ, aghụghọ iji mata ọdịiche ha
Agụụ mmetụta uche dị ize ndụ, n'ihi na ọ naghị eme ka ịchọọ ihe dị mma, na ntụle, ọ na -eme ka ịhọrọ oke kalori nhọrọ. Ọtụtụ mgbe ndị nwere nchekasị na -ata ahụhụ na-eri ihe na-atọ ụtọ na ngwaahịa ndị nwere shuga. N'ụzọ ụfọdụ, shuga ọ bụ ihe na -emepụta ahụ riri ahụ na nsogbu ndị metụtara ya ka a na -emeso dị ka ịdabere ọ bụla ọzọ.
Ịmụta ịmata ọdịiche dị n'etiti agụụ anụ ahụ na agụụ n'ihi ike ọgwụgwụ ma ọ bụ nchekasị dị mkpa iji nwee mmekọrịta dị mma na nri. Maka na ọ naghị esiri ike ịgabiga oke nwere ike bụrụ nnukwu nsogbu. Tupu erute ya, chọpụta ka esi achọpụta ma agụụ na-agụ gị n'ezie ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-achọ naanị ụzọ ị ga-esi dajụọ nchegbu gị.
Kedu ka agụụ si apụta? Mgbe agụụ na -agụ ya, ọ na -apụta nwayọọ nwayọọ. Nke nta nke nta, agụụ na-agụ gị, mkpa iri nri. Kama, ọ bụrụ na ọ pụta na mberede, na mberede na ihe ị chọrọ bụ nri dị ka chocolate, pastries ma ọ bụ nri ngwa ngwa, ọ bụ ihe ịrịba ama doro anya nke agụụ n'ihi nchekasị.
N'ihi na agụụ na -agụ gị? Agụụ anụ ahụ bụ ịdọ aka na ntị sitere n'ahụ gị maka mkpa mmanụ mmanụ. Agụụ mmetụta uche na mkpa imeju oghere, mkpa maka obi ụtọ ozugbo.
Kedu otu esi emeju onwe gị? Mgbe agụụ na-agụ gị, ị na-eri ihe dị gị mkpa ma n'oge ụfọdụ ị na-enwe afọ ojuju. Kama, agụụ mmetụta uche siri nnọọ ike ikpuchi n'ihi na ozugbo i richara nri, ị ga -echegharị ọzọ na mkpa ikpuchi mkpa ahụ nke na -emetụta mmụọ, ọ bụghị nke anụ ahụ.
Kedu ka ọ dị gị ma ị gụchaa? Agụụ mmetụta uche enweghị isi, ọ na -eme ka ị rie ihe nke ahụ gị adịghị mkpa mana nke na -enye gị obi ụtọ ozugbo. Otú ọ dị, ozugbo ọ kwụsịrị, mmetụta nke obi amamikpe na-abịarute, nke na-eme ihe ọ bụla karịa mụbaa nchekasị na nhụjuanya mmetụta uche.
Tupu ị na-aṅụbiga mmanya ókè, chọta ụzọ ị ga-esi mee ka nchegbu gị dajụọ n'ụzọ ọzọ. Dụgharịa uche ka mmetụta ahụ pụọ. Nwee nnukwu iko mmiri wee malite ọrụ ọ bụla na -enyere gị aka ichefu mmetụta ahụ. Ọ bụrụ na ọ ga -ewe obere oge na agụụ ka na -agụ gị, lee oge, ma eleghị anya ọ bụ oge iri nri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Ndụmọdụ gbasara ahụike » Agụụ, nchekasị, ma ọ bụ ike ọgwụgwụ? Aghụghọ ịkọwapụta ha
Uwe mmiri ozuzo, onye ya na ya ga -eche ihu mmiri mbụ
Chọpụta ihe bụ nlekọta bụ isi maka ihu gị